တစ်ဦးကအားလပ်ရက်များအတွက်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးရေပန်းခြံ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > တစ်ဦးကအားလပ်ရက်များအတွက်ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးရေပန်းခြံ
အဘယ်အရာကိုမျှအားလပ်ရက်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်ပြောပါတယ်, အတော်လေးရေပန်းခြံနဲ့တူ, သငျသညျမထငျမ? နေရောင်, ရေခဲမုန့်, တချို့အကြီးအကျယ်ရေဆလိုက်ဆင်းလျှောအဆိုပါကာလအတွင်းပျော်စရာအဘို့အဆုံးစွန်စာရွက်ဖြစ်ပါသည် နွေရာသီအားလပ်ရက်များ! ကျနော်တို့အထဲကစမ်းသပ်၏ခက်ခဲတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးရေပန်းခြံ ကိုယျ့ကိုယျကိုကျနော်တို့တတျနိုငျသကြောင်းသင်သည်ထိုသူတို့အပေါ်အများဆုံးတိကျအစီရင်ခံပေးရ! ဤတွင်များမှာ သင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုခံစားရန်အဘို့အဥရောပမှာအကောင်းဆုံးရေပန်းခြံများ.
Lalandia - Billund, ဒိန်းမတ်
အချို့သော Nordic စွန့်စားမှုများအတွက်ခံစားချက်အတွက်? ထွက်ခွာသည် Lalandia, ယမ်အတွက်အကြီးမားဆုံးရေပန်းခြံ, နှင့်ဥရောပထဲမှာအကောင်းဆုံးရေပန်းခြံထဲကတစ်ခု. မိသားစုဖော်ရွေဆလိုက်တစ်ခုရွေးချယ်ရေး featuring, ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်ရေဘဝဲစီးနင်းကိုချစ်! သော်လည်းအခါနောက်တစ်နေ့ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ပြပွဲမ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်မီးမောင်းထိုးပြ ဒီပန်းခြံ ပတ်သက်. အပူရေကန်နှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်ပျင်းရိစီးများမှာ!
ဒီ Turn ခရီးစဉ် သိပ်ထားတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတဦးတည်းသို့. ကလေးများဟာဂူရေကူးကန်ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်, သူတို့သန္တာကျောက်တန်းများနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားငါးစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ့. အဆိုပါရေဘဝဲအပေါ်စိတ်အားထက်သန်မဟုတ်? သို့ဖြစ်လျှင်ဤဆက်ဆက်သင့်ရဲ့ဖန်စီယားပါလိမ့်မယ်; အပန်းဖြေစွဲလမ်းမိဘများသည်ရနံ့ကုထုံအပူပေးခန်းအတွက်လွယ်ကူသောရှူနိုင်ပါတယ်! နိုင်ပြီ! ကလေးတွေပျော်မွေ့ပါစို့ အဆိုပါ Aqua splash ရေကစားကွင်း, အဆိုပါ Monky Tonky မိုးလုံလေလုံ playland, သို့မဟုတ်သင်အအေးမိနေစဉ်ဘိုးလင်းသွားပါ.
ရေအနည်းငယ်ချစ်သူများငါးသေးငယ်ရေဆလိုက်လည်းရှိပါတယ်. ဆုငှေ: Lalandia Billund တွင်တည်ရှိသည်, LEGOLAND အခြားကြီးမားသောမိသားစုသရေကျသည်အဘယ်မှာရှိ!
အပူပိုင်းဒေသကျွန်း Amazonia - Brandenburg အမည်ရှိသတို့သား, ဂျာမနီ
ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်အကောင်းဆုံးပေါ်တွင်အအေးဆုံးဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ကြောင်းနိုင်ငံများတွင်ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးရေပန်းခြံအချို့တွေ့ရှိရကြောင်းကိုသင်ကဲ့သို့အံ့အားသင့်နေ ဆောင်းရာသီ လများ. Brandenburg အမည်ရှိသတို့သားအတွက်အပူပိုင်းကျွန်း Amazonia, ဂျာမနီ အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါသည်.
မှတစ်နာရီရဲ့ drive ကိုအကြောင်းကိုတည်ရှိပြီး ဘာလင်မြို့တွင်ဗဟိုဘူတာရုံ, အပူပိုင်းဒေသကျွန်း Amazonia အကြီးအကျယ် 35000 စတုရန်းမီတာရေပျော်စရာ-ပရဒိသုဖြစ်ပါသည်. လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး? အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးပွင့်လင်းဒါဟာင်! ဟုတ်တယ်, ကလေးရာသီမိုးလုံလေလုံ-ပြင်ပတွင်တောင်ပစိဖိတ်-ရေးရာင် ဆှဲအား! ဒါဟာ 27 မီတာမြင့်မားသောရေ-ဆလိုက်ရဲတိုက်ကိုတပ်ဆင်ထား, တစ်ဦးမိုးလုံလေလုံသမုဒ္ဒရာ, တစ်အပူဂွန, ရေကစားစားပွဲနှင့်အတူကာ kiddie ရေကူးကန်.
စိုစွတ်သောဖြစ်ခြင်း၏ပင်ပန်းပေမယ့်နေဆဲပျော်စရာရှိသည်ချင်? စိတ်မပူပါနဲ့ဖို့မ, Mini-ဂေါက်သီးတစ်လှည့်လည်ဘို့ sign up ကိုသို့မဟုတ်တစ်ဦးလေကြောင်းပူဖောင်းစီးယူ. သဘာဝတရား-မေတ္တာရှင်မိသားစုများမှာလည်းပန်းခြံရဲ့မိုးလုံလေလုံမိုးသစ်တောပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်, အရာအင်္ဂါရပ်များ 50,000 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအပင်. ကျနော်တို့ရွေးကောက်တော်မူပြီရေပန်းခြံများအများစုကဲ့သို့ပင်, မိဘများအတွက်တစ်ခုခုရှိမယ့်, လွန်း! တစ်စုံတစ်ဦးကပူဖောင်း loungers နှင့်အနှိပ်ရေကန်ပွောခဲ့? ကို Count!
ရေပန်းဥယျာဉ် Splashworld – Avignon ပြင်သစ်
ဒါဟာပြင်သစ်တွင်ပထမဦးဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးရေ Theme ဥယျာဉ်, တည်ရှိပြီး Provence ဒေသ, Avignon အနီး, သင်ကမိသားစုစီးပေးနိုငျ, ငယ်ရွယ်သောကလေးများအတွက်ဒေသများ, ကွဲပြားခြားနားသောရေဆလိုက်, အတွက်အကြီးဆုံးပျင်းရိမြစ် ဥရောပ, ကမ်ဘာပျေါတှငျလညျးအကြီးမားဆုံးလှိုင်း Simulator ကို. ဤရေပန်းခြံနွေရာသီရာသီအတွင်းဖွင့်လှစ် (ဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလမှ) ထိုသို့ကိုလည်းမသန်စွမ်းလူတို့အဘို့သင့်လျော်သည်.
How to reach splash ကမ္ဘာ့ဖလား W ကပန်းခြံအာတာ?
Splashworld တည်ရှိသည် 17 Avignon ကနေကီလိုမီတာ, အရာကအလွယ်တကူစေသည်! လည်း, Avignon ၏ရထားဘူတာရုံနှင့်အတူရေပန်းခြံကိုဆက်သွယ်သောဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ၏ရငျးနှီးမှု, သူတို့အဘို့ဖြစ်နိုင်စေသည် ခရီးသွားလာ တခြားကနေဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ရထား ပြင်သစ်တွင်တည်နေရာ လျင်မြန်စွာ Splashworld ရောက်ရှိရန်!
15 ၏ 17 ရေကန်အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးနှင့်ကြီးမားသောမိုးလုံလေလုံရေကန်၏တစျနှစျတလျှောက်လုံးမှာလည်းပွင့်လင်းတဲ့အပူပြင်ပရေကူးကန်ချိတ်ဆက်ဖွင့်. အဆိုပါလှိုင်းရေကူးကန်နှင့်လှိုင်းရေကူးကန်၏လေထုကျလာသော ပင်လယ်ကမ်းခြေအားလပ်ရက်. အဆိုပါလှိုင်းရေကူးကန်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါသည်! ဒါဟာမိုးလုံလေလုံအသုံးပြုရန်တီထွင်အထူးပျဉ်ပြားနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူသုံးနိုငျ.
သငျသညျအခြို့သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်တစ်ဦးလည်းမရှိ 25 မီတာ (82 ပေ) ရေကူးကန်နှင့်3မီတာ (10 ပေ) ရေငုပ်မျှော်စင်. အဆိုပါမိုးလုံလေလုံစွန့်စားမှုရေကူးကန်ကမ်းလှမ်းမှု 11 နီးပါးစုစုပေါင်းအရှည်နှင့်အတူဆလိုက် 1 ကီလိုမီတာ (0,6 မိုင်). အမြင့်ဆုံးဆလိုက်နေတဲ့စိတျလှုပျရှားစရာစီးနင်းပေါ်တွင်သင်ချယူ 17 မီတာ (55 ပေ). လည်း, အနားမှာအထိလူသုံးယောက်ဘက်များအတွက်ကျယ်ပြန့်ဆလိုက်အဖြစ်ကြက်သွန်ဆလိုက်များနှင့်တစ်ဦးလည်းမရှိ 180 မီတာ (590 ပေ) ရှည်လျားသောတောင်ပေါ်မြစ်, မတ်စောက်သောကျောက်ဆောင်နှင့်အတူ flanked, သငျသညျစွန့်စားခံစားနေကြမယ်ဆိုရင်.
ရထားဖြင့် Avignon သို့ Lyon
ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးရေပန်းခြံများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံး Pick ဖြစ်ပါသည်: ရေပန်းဥယျာဉ် Caneva ကမ္ဘာ့ဖလား, အီတလီ
ရေကန် Garda က၎င်း၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတှကျအကျော်ကြားဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့် Caneva ကမ္ဘာ့ဖလားကယ့်ကိုအမှုအရာထချောက်ချား. This double whammy ofaဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ Movieland နှင့် Acquapark အကြားခွဲခြားထားသည်.
အဆိုပါနီးစပ်သူ Get လှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင် အပေါ် တိုက်ရိုက်သတ်မှတ်မည် Overdrive, မှာသင့်ရဲ့ထိုင်ခုံပေါ်သို့ဆွဲထား ယောဟနျသ Rambo တန့်ကိုပြသပါ, ထို့နောက်မှာအားလုံးမယုံရပ်ဆိုင်း Illusionist ပြသ. အားလုံးမိသားစုများအတွက်စီးရှိပါတယ်, ယင်းအပေါ်ပြိုင်ကားရေ စိန့်ကစ်စူပါဂျက်, ၏ဇိုင်းထွဋ်မှ ဟောလိဝုဒ်လှုပ်ရှားမှုမျှော်စင် နှင့်ကြောက်စရာ Diabolik Invertigo ရိုလာကိုစတာ.
အားလုံးကြောင်း action ကိုနည်းနည်းများလွန်းပူပြင်းရရှိသွားတဲ့ အကယ်., Caneva Aquapark သို့ငုပ်နှင့်စွန်ပလွံပင်အောက်မှာဆန့်, ကြီးမားတဲ့မီးတောင်အရိပ်ထဲမှာ! သို့သော်အလွန်ကြီးစွာသောလှိုင်းရေကူးကန်နှင့်တူသောအံ့သြဖွယ်ရေဆလိုက်တွေနဲ့ အမွှာ Peak, Anaconda နှင့် ရှယ်ရီ ကမ်းခြေကိုပိတ်ထားသငျသညျကိုစုံစမျးဖို့အများကြီးရှိပါတယ်.
ဖျော်ဖြေရေးမှာဆက်လက် အလယ်ခေတ် Times ကစားသောက်ဆိုင် & ပြသ – တစ်ဦးအလယ်ခေတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချစီးနင်း ရဲတိုက် နှင့်နိုက်များအတွက်အဆင်သင့်မရ, မြင်းများ, ကြီးစွာသော jousting ပြိုင်ပွဲ!
သင့်ရဲ့ swimsuit ထုပ်ပိုးနှင့်ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးရေပန်းခြံကိုရှာဖွေတဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်သွားကြဖို့အဆင်သင့်? ဟုတ်ကဲ့ Heck! သေးအကောင်းဆုံးသတင်း, သငျသညျ၏အကူအညီဖြင့်လွယ်ကူစွာကဤခရီးစဉ်၏လူအပေါင်းတို့အားရနိုင် SaveATrain ! အဘယ်သူမျှမဝှက်ထားသောအပိုဝန်ဆောင်ခနှင့်အတူ, သငျသညျကြောက်မက်ဘွယ်စီးနှင့်ကောင်းမွန်သောကြိမ်ပေါ်သုံးဖြုန်းဖို့ပိုရှိသည်လိမ့်မယ်! စာအုပ်နွေရာသီအားလပ်ရက်ကြောင်း, ယခု!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-water-parks-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml သင် / fr မှ / es သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#summertrip #summerwaterpark #waterparks europetravel familytrip နွေရာသီ